२८ करोड राज’स्व छ’ली गर्नेको घर के यस्तै हुन्छ र ? – Sudur Sanchar
पुष २३, २०७८ शुक्रबार 21
वीरगन्ज । ‘नेपालको का’नुन दैवले जानुन्’ यो कथन त्यत्तिकै कथिएको होइन रहेछ । कु’कर्म गर्ने एक जना त्यसको स’ट्टामा सजा’य भो’ग्नुपर्ने अर्कैले ।
यो कथा सुन्दा कुनै चलचित्र हेरेजस्तो भान हुन्छ । उनी हुन्, २२ वर्षीय उमाशंकर रायभर ।
बारा जिल्ला निवासी सुकुम्बा’सी परिवारमा जन्मिएका छोरा हुन्, उमाशंकर । अहिले उनी २८ करोड रा’जस्व छ’लीको आ’रोपमा कै’दीबन्दी जीवन बिताइ रहेका छन् ।
बाराको परवानीपुर गाउँपालिका– १, गौनहरी टोलको सुकुम्वा’सी परिवारमा जन्मेर गरि’बीको च’पेटामा हुर्केका उमाशंकरको कुनै ठूलो महत्व’कांक्षा थिएन ।
उनकै एउटै ध्येय थियो-सुखका साथ परिवार पाल्ने । तर, आज उनी काठमाडौं स्थित नख्खु का’रागा’रमा बिति रहेको छ । करोड रुपैयाँको नाम न’सुनेका,
वर्षभर लाख रुपैयाँ कमाउन धौँ धौँ पर्ने उनीमाथि २८ करोड रा’जस्व छ’लीको आ’रोप छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उमाशंकर माथि ‘नक्क’ली,
जा’लसाजी तथा झू’टो मूल्य अभिवृ’द्धि क’र बीजक बनाई राज’स्व चुहावट गरेको प्र’माणित भएको’ भन्दै मु’द्दा चलाएको छ ।
यदि, उच्च अदालतको आदेश बमोजिम उमाशंकरले ७५ लाख ध’रौटी तिर्न सकेका भए उनी कै’दी जीवनबाट मु’क्त हुन्थे । तर, उनले त्यत्ति धेरै र’कम कहाँबाट जुटाउन् ।
‘जो सोझो उसैलाई घोचो’ भनेझैँ अहिले उमाशंकर यहीँ द’लदलमा फ’सेका छन् । आफूले गर्दै नगरेको अप’राध नख्खु कार’गारमा भोगिरहेका छन्
को हुन्, उमाशंकर ? मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिने वीरगन्जदेखि ३ किलोमिटर पूर्व बाराको प्रसौनी चोकदेखि करिब ४ किलोमिटर उत्तरतर्फ
सडक छेउमै करिब ५० घर धुरीको सु’कुम्वासी परिवारहरुको वस्ती रहेको टोल हो, गौनहरी टोल । त्यही टोलमा १२ धुर ऐलानी जग्गामा ख’पडाले बनेको क’च्ची घरमा हुर्केका हुन्,
उमाशंकर । सानैमा आमा गुमा’एका उमाशंकरको घरमा बि’रामी बुबा, दाजु–भाउजू, श्रीमती र सन्तान छन् ।
आर्थिक अवस्था कम’जोर भएकोले दाजु सन्तोष रायभरको कमाईले मात्र घर परिवार चल्न नस’केपछि उनी विगत ६ वर्षअघि मोटरसाइकलको काम सिक्नका उमाशंकर काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए ।
गाउँकै उमा शंकर सहनीको साथ लागेर १६ वर्षकै उमेरमा मोटर साइकल मेका’निक बन्ने सपना बोकेर काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए, उमाशंकर । सहनीले उनलाई मोटरसाइकल ग्यारेजमा राम्रो काम लगाइदिने आ’श्वासन देखाएर नागरिकता ल्याउन भने ।
सहनीसँगै सर्लाहीको गोडैता – ८ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौंको कोटेश्वर बस्दै आएका सरोज कुमार मिश्र पनि उनीसँगै साथमा आएका थिए ।
राम्रो काम लगाउने भने पछि उमाशंकरले सहनीलाई भोलिपल्ट नै नागरिकताको फोटो कपी बुझाए । त्यस दिन मिश्र र सहनीले थप कागजात पनि ल्याएका थिए ।
दुवैले भनेबमोजिम त्यस कागजातमा उमाशंकरले कुनै शं’काविना औंठाछाप लगाइदिए ।
बाराको सरकारी स्कुलमा कक्षा ५ सम्म पढेका रायभरले आफूले ल्या’प्चे लगाइदिएका कागजात पनि पढे’नन्। सानैदेखि बायाँ आँखामा स’मस्या भएका उनले राम्रोसँग शब्द र दृश्य प’हिल्याउन सक्दैनन्।
उमाशंकरका दाजु सन्तोष रायभरले भने धेरै कागजपत्रमा ल्या’प्चे लगाएपछि जागिर पाइन्छ भन्नेमा औँधी खुस थिए । तर, कागजातमा औँठा छाप लगाएर हिँडेका सहनी र मिश्र फर्केर आएनन् ।
सहनीलाई पर्खेर बसेका उमाशंकरले परिवार पाल्न झापाको ट्याक्टर शोरुममा काम गर्न थाले । मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउथे ।
२०७६ मा बिहे भएको उमाशंकरको २०७७ पुसमा छोरी जन्मिइन् । त्यसपछि थप परिवारमा आ’र्थिक बो’झ थपियो । अझ आर्थिक स्थिति मजबुत पार्नुपर्ने भयो ।
र, उनी झापामै श्रम बगाइरहेका थिए। उमाशंकरमाथि रा’जस्व अनुस’न्धान विभा’गले काठमाडौंमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स प्रालि दर्ता गरी जा`लसा`जी तथा झू`टो कर बीजक जारी गरेर राज’स्व चुहा’वट गरेको अ’भियोग लगाएको छ।
यी दुई कम्पनीमार्फत क्रमशः१५ करोड ८७ लाख ७ हजार र १२ करोड ३ लाख गरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ क’र छलेको अभि’योग उनीमाथि छ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्चअदा`लत पाटनमा दर्ता गरेको अ’भियो’गपत्रमा उमाशंकरले राज’स्व छलेको भनिएको रकम बराबर जरिवाना साथै मु`द्दा फै`सला हुने समयसम्मको थप ज’रिवा’ना र पाँच वर्षसम्म कै’द गर्न माग गरेको छ । खबर हाउस बाट
Prevएक दिन बढी बिदा बसेको बहानामा कम्पनीले निकालिदिएपछि मलेसियामा नेपाली अलपत्र